▷ Burmai útiszótár
Miért és hogyan érdemesaburmai szókincset hangfelvételről tanulni?
Burma elsődleges vallásaabuddhizmus, amely egyre több embert vonzefelé az életfilozófia felé. Ráadásul érdemes felfedezni az ország gazdag kultúráját, gasztronómiáját (ားသေသောက်ဆဘယ်မိုငုင်ကောင်းှးာရှိပါသလဲ / its thauk? SaiN kaung bei mha shi' Ba the lei: "hol vannakajó helyek, ahol érdemes enni?"), morális és környezeti kérdéseit is. Ha tervezed, hogy ellátogatsz az országba, meglepetésként érhet, milyen gyönyörűekavárosok, és milyen forgalmasak az utak (တက်(က) စီ ami azt jelenti "taxi"), ésahelyiek néhány szokása is.
A nyelvben sok az egy szótagú szó, így első ránézésre egyszerűnek tűnhet. A rendszeres gyakorlással hamar hozzászokhatszanyelvhez, szókincsfejlesztő feladatlapjainkat pedig kifejezetten kezdőknek és olyan utazóknak készítettük, akik az alapvető szókincset szeretnék elsajátítani (ကျနော်တို့ အလည်လာတာပါ။ / Kya nau to' ah lei la ta ba : "nyaralunk").
A szókincsfejlesztő feladatlapjaink és különböző média javaslataink segíteni fognak, hogy sikeresen elsajátítsd eztanyelvet!
Válogassaburmai kultúrával kapcsolatos tartalmakból!
Több énekes, már meglévő dalok szövegeit megváltozatva énekelacenzúra miatt
A szavak és kifejezések tematikák szerint vannak csoportosítva. A Kvíz vagyaKurzusok gombra kattintva hozzáférhetszateljes burmai nyelvkurzushoz . A nyomtatás, gombra kattintva, ki tudod nyomtatni az összes téma kifejezéseit. Ezatartalom ingyenesen elérhető.
🔊 Jónapot! 🔊 မင်္ဂလာပါရှင် miN ga la ba shiN
🔊 Jóestét! 🔊 မင်္ဂလာပါရှင် miN ga la ba shiN
🔊 Viszlát! 🔊 သွားတော့မယ် thwa dau mai
🔊 Később találkozunk 🔊 တွေ့မယ်နော် ta wei mai nau
🔊 Igen 🔊 ဟုတ်ကဲ့ hoʔ kei'
🔊 Nem 🔊 မဟုတ်ဘူး ma hoʔ b̠ū
🔊 Elnézést 🔊 ဒီမှာရှင် di mha shiN
🔊 Elnézést 🔊 တစ်ဆိတ်လောက် tit saiʔ lautʔ
🔊 Köszönöm 🔊 ကျေးဇူးတင်ပါတယ် kyei zū tin pa tei
🔊 Köszönöm szépen! 🔊 ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် kyé zūamyā gyi tin ba tai
🔊 Köszönömasegítségét! 🔊 ကူညီတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ku nyi tei'athwet kyé zū tin ba tai
🔊 Kérem 🔊 ကိစ္စမရှိပါဘူး ké sa ma shiʔ ba b̠ū
🔊 Kérem 🔊 ရပါတယ် ya ba tei
🔊 Jó - Jól van – Oké 🔊 ကောင်းပါပြီ kaung pa bī
🔊 Elnézést, ez mennyibe kerül? 🔊 ဒါဘယ်လောက်ပါလဲ da bai lautʔ pa lé
🔊 Bocsánat! 🔊 စိတ်မရှိပါနဲ့ခင်ဗျာ saiɁ ma shi pa nei' kin bya
🔊 Bocsánat! 🔊 စိတ်မရှိပါနဲ့ရှင် saiɁ ma shi pa nei' shiN
🔊 Nem értem 🔊 နားမလည်ပါဘူး nā me lé pa bū
🔊 Értem 🔊 သိပြီ thi pyi
🔊 Értem 🔊 နားလည်ပြီ nā lé pa pyi
🔊 Nem tudom 🔊 မသိဘူး ma thi bū
🔊 Tilos 🔊 ခွင့်မပြု khwoinʔ ma pyu
🔊 Tilos 🔊 မလုပ်ရ ma loʔ ya
🔊 Elnézést, hol vanaWC? 🔊 အိမ်သာဘယ်မှာရှိပါသလဲ aiN tha bai mha shiʔ the lei
🔊 B.ú.é.k! 🔊 မင်္ဂလာနှစ်သစ်ပါ miN ga la hnit thit pa
🔊 Boldog születésnapot! 🔊 မွေးနေ့မှာပျော်ရွှင်ပါစေ maweī nei' mha pyau pa sai
🔊 Kellemes Ünnepeket! 🔊 မဲရီး ခရစ်စမတ်စ် /Merry Christmas merri christmas
🔊 Gratulálok! 🔊 ဂုဏ်ယူပါတယ် goN yū pa tai
🔊 Gratulálok! 🔊 ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါတယ် goN yū wuN myauk pa tai
🔊 Szia! Hogy vagy? 🔊 နေကောင်လား nai kaung lā
🔊 Szia! Köszönöm, jól 🔊 နေကောင်းပါတယ် mai kaung pa tai
🔊 Beszélsz burmaiul? 🔊 ဗမာ/မြန်မာ စကားပြောတတ်လား Myamar sa kā pyau tat lā
🔊 Nem beszélek burmaiul 🔊 ဗမာ/မြန်မာ စကားမပြောတတ်ဘူး Bamar sa kā me pyau tatɁ bū
🔊 Csak egy kicsit 🔊 နည်းနည်းလေး nei nei lai
🔊 Honnan jöttél? 🔊 ဘယ်နိုင်ငံကလာသလဲ bai Naing ńgan ga la the lai
🔊 Milyen nemzetiségű vagy? 🔊 ဘာလူမျိုးလဲ ba lu myō lai
🔊 Magyar vagyok 🔊 ကျနော် ဟန်ဂေရီရာန် လူမျိုးပါ kya nau hungarian lu myo ba
🔊 És te, itt élsz? 🔊 ဒီမှာနေတာလား di mha nai ta lā
🔊 Igen, itt lakom 🔊 ဟုတ်တယ်၊ ဒီမှာနေပါတယ်။ hoʔ tai di mha nay pa tai
🔊 Engem Sarah-nak hívnak, és téged? 🔊 ကျမနာမည်က ဆာရာ ရှင့်နာမည်ရောဘယ်လိုခေါ်သလဲ။ kya ma na mai ka sa ya - shinɁ namai yau bé lo kau the léi
🔊 Julien vagyok 🔊 ဂျူလီယံပါ ju li an ba
🔊 Mit csinálsz itt? 🔊 ဒီမှာဘာလာလုပ်တာလဲ di mha ba la lōʔta lei
🔊 Nyaralok 🔊 အလည်လာတာပါ။ ah lai la ta ba
🔊 Nyaralunk 🔊 ကျနော်တို့ အလည်လာတာပါ။ Kya nau to' ah lei la ta ba
🔊 Üzleti úton vagyok 🔊 အလုပ်အတွက်လာတာပါ။ ah lōʔ ah taweiʔ la ta ba
🔊 Itt dolgozom 🔊 ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ di mha ba la loʔ lōʔ lei
🔊 Itt dolgozunk 🔊 ကျနော်တို့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ kya nau to' di mha ah loʔ loʔ tei
🔊 Itt dolgozunk 🔊 ကျမတို့ ဒီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ kya ma to' di mha ah loʔ loʔ tei
🔊 Hol lehet jót enni? 🔊 စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်း ဘယ်မှာရှိပါသလဲ sa thauk ? SaiN kaung bei mha shi ' Ba the lei
🔊 Vanaközelben múzeum? 🔊 ဒီနားမှာ ပြတိုက်ရှိသလား ̄di nā mha pya' thaiʔ shi' the lā
🔊 Hol tudok internetezni? 🔊 အင်တာနက်ဆိုင်ဘယ်မှာရှိသလဲ iN ta neiʔ saiN bei mha shi' the lei
🔊 Szeretnél megtanulni egy pár szót? 🔊 စကားနည်းနည်းသင်ချင်သလား sa kɑ̄ nei nei tiN chiN the lā
🔊 Persze! 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ ကောင်းပါတယ် hokʔ ké' kaung pa tei
🔊 Ezt hogy hívják? 🔊 ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲ da bei lo kau lei
🔊 Ez egy asztal 🔊 စားပွဲ sa pwè
🔊 Asztal, érted? 🔊 စားပွဲ၊ သိလား sa pwè, thi lā
🔊 Asztal, érted? 🔊 နားလည်လား na lei lā
🔊 Megismételnéd? 🔊 ထပ်ပြောပြပါဦး pyaN pyau pa ohN
🔊 Tudnád kicsit lassabban mondani? 🔊 ဖြေးဖြေးလေးပြောပြပါ pyei pyei pyau pa
🔊 Leírnád, légy szíves? 🔊 ရေးပြပါ yé pya ba
🔊 Tetszik az asztal színe 🔊 ဒီစားပွဲအရောင်ကိုကြိုက်တယ် di sa pwè ah yaung kyaikʔ tei
🔊 Ez piros 🔊 အနီရောင် ah ni yaung
🔊 Kék 🔊 အပြာရောင် ah pya yaung
🔊 Sárga 🔊 အဝါရောင် ah woh yaung
🔊 Fehér 🔊 အဖြူရောင် ah pyu yaung
🔊 Fekete 🔊 အမဲရာင် ah méi yaung
🔊 Zöld 🔊 အစိမ်းရောင် ah saiN yaung
🔊 Narancssárga 🔊 လိမ္မော်ရောင် laiN mau yaung
🔊 Lila 🔊 ခရမ်းရောင် ka yan yaung
🔊 Szürke 🔊 မီးခိုးရောင် mi go yaung
🔊 Nulla 🔊 သုည - ၀ thoN ŋya
🔊 Egy 🔊 တစ် - ၁ titʔ
🔊 Kettő 🔊 နှစ် - ၂ nhit'
🔊 Három 🔊 သုံး - ၃ thouN
🔊 Négy 🔊 လေး - ၄ léi
🔊 Öt 🔊 ငါး - ၅ ŋa
🔊 Hat 🔊 ခြောက် - ၆ chaukʔ
🔊 Hét 🔊 ခုနှစ် - ၇ kouN nhit'
🔊 Nyolc 🔊 ရှစ် - ၈ chit ?
🔊 Kilenc 🔊 ကိုး - ၉ ko
🔊 Tíz 🔊 တစ်ဆယ် - ၁၀ thit sai
🔊 Tizenegy 🔊 ဆယ့်တစ် - ၁၁ seʔ titʔ
🔊 Tizenkettő 🔊 ဆယ့်နှစ် - ၁၂ seʔ nhit'
🔊 Tizenhárom 🔊 ဆယ့်သုံး - ၁၃ seʔthouN
🔊 Tizennégy 🔊 တစ်ဆယ့်လေး - ၁၄ seʔ léi
🔊 Tizenöt 🔊 တစ်ဆယ့်ငါး - ၁၅ seʔ ŋa
🔊 Tizenhat 🔊 တစ်ဆယ့်ခြောက် - ၁၆ seʔ chaukʔ
🔊 Tizenhét 🔊 တစ်ဆယ့်ခုနှစ် - ၁၇ seʔ kouN nhit
🔊 Tizennyolc 🔊 တစ်ဆယ့်ရှစ် - ၁၈ seʔ chitʔ
🔊 Tizenkilenc 🔊 ဆယ့်ကိုး - ၁၉ Seʔ ko
🔊 Húsz 🔊 နှစ်ဆယ် - ၂၀ nhit sai
🔊 Huszonegy 🔊 နှစ်ဆယ့်တစ် - ၂၁ nhit seʔ titʔ
🔊 Huszonkettő 🔊 နှစ်ဆယ့်နှစ် - ၂၂ nhit seʔ nhit'
🔊 Huszonhárom 🔊 နှစ်ဆယ့်သုံး - ၂၃ nhit seʔ thouN
🔊 Huszonnégy 🔊 နှစ်ဆယ့်လေး - ၂၄ nhit seʔ léi
🔊 Huszonöt 🔊 နှစ်ဆယ့်ငါး - ၂၅ nhit seʔ ŋa
🔊 Huszonhat 🔊 နှစ်ဆယ့်ခြောက် - ၂၆ nhit seʔ chauk
🔊 Huszonhét 🔊 နှစ်ဆယ့်ခုနှစ် - ၂၇ nhit seʔ kouN nhit
🔊 Huszonnyolc 🔊 နှစ်ဆယ့်ရှစ် - ၂၈ nhit seʔ chitʔ
🔊 Huszonkilenc 🔊 နှစ်ဆယ့်ကိုး - ၂၉ nhit seʔ ko
🔊 Harminc 🔊 သုံးဆယ် - ၃၀ thouN sai
🔊 Harmincegy 🔊 သုံးဆယ့်တစ် - ၃၁ thouN seʔ titʔ
🔊 Harminckettő 🔊 သုံးဆယ့်နှစ် - ၃၂ thouN seʔ nhit
🔊 Harminchárom 🔊 သုံးဆယ့်သုံး - ၃၃ thouN seʔ thouN
🔊 Harmincnégy 🔊 သုံးဆယ့်လေး - ၃၄ thouN seʔ léi
🔊 Harmincöt 🔊 သုံးဆယ့်ငါး - ၃၅ thouN seʔ ŋa
🔊 Harminchat 🔊 သုံးဆယ့်ခြောက် - ၃၆ thouN seʔ chauk
🔊 Negyven 🔊 လေးဆယ် - ၄၀ léi sai
🔊 Ötven 🔊 ငါးဆယ် - ၅၀ ŋa sai
🔊 Hatvan 🔊 ခြောက်ဆယ် - ၆၀ chauk sai
🔊 Hetven 🔊 ခုနှစ်ဆယ် - ၇၀ kouN nhit' sai
🔊 Nyolcvan 🔊 ရှစ်ဆယ် - ၈၀ chit ? Sai
🔊 Kilencven 🔊 ကိုးဆယ် - ၉၀ ko sai
🔊 Száz 🔊 တစ်ရာ - ၁၀၀ titʔ ya
🔊 Százöt 🔊 တစ်ရာ့ငါး - ၁၀၅ titʔ ya ŋa
🔊 Kétszáz 🔊 နှစ်ရာ - ၂၀၀ nhit ya
🔊 Háromszáz 🔊 သုံးရာ - ၃၀၀ thouN ya
🔊 Négyszáz 🔊 လေးရာ - ၄၀၀ léi ya
🔊 Ezer 🔊 တစ်ထောင် - ၁၀၀၀ titʔ taung
🔊 Ezerötszáz 🔊 တစ်ထောင့်ငါးရာ - ၁၅၀၀ titʔ taung ŋa ya
🔊 Kétezer 🔊 နှစ်ထောင် - ၂၀၀၀ nhit taung
🔊 Tízezer 🔊 တစ်သောင်း - ၁၀၀၀၀ titʔ thaung
🔊 Mikor érkeztél? 🔊 ဘယ်တုန်းကရောက်သလဲ။ bei ' toN ka yauk the lei
🔊 Ma 🔊 ဒီနေ့။ di nei'
🔊 Tegnap 🔊 မနေ့က။ me nei' ka
🔊 Két napja 🔊 နှစ်ရက်ရှိပြီ။ hnit yetʔ shi pyi
🔊 Meddig maradsz? 🔊 ဘယ်လောက်ကြာကြာနေမလဲ။ bei laukʔ kya kya nei me lei
🔊 Holnap megyek el 🔊 မနက်ဖြန်ပြန်မယ်။ me netʔ phyaN pyaN mei
🔊 Holnapután megyek el 🔊 သဘက်ခါပြန်မယ်။ th metʔ kha pyaN mei
🔊3nap múlva megyek el 🔊 နောက်သုံးရက်နေရင်ပြန်မယ်။ naukʔ 'thouN yetʔ nei yiN pyaN mei
🔊 Hétfő 🔊 တနင်္လာနေ့ ta niN la nei'
🔊 Kedd 🔊 အင်္ဂါနေ့ iN ga nei'
🔊 Szerda 🔊 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ bo da hū nei'
🔊 Csütörtök 🔊 ကြာသပတေးနေ့ kya tha pa 'tei nei'
🔊 Péntek 🔊 သောကြာနေ့ thauʔ kya nei'
🔊 Szombat 🔊 စနေနေ့ sa nei nei'
🔊 Vasárnap 🔊 တနင်္ဂနွေနေ့ ta niN ga nwé nei'
🔊 Január 🔊 ဂျန်နဝါရီ ja nu ah ri
🔊 Február 🔊 ဖေဖော်ဝါရီ pé bu ah ri
🔊 Március 🔊 မတ်(ချ) ma ch
🔊 Április 🔊 ဧပြီapa ril
🔊 Május 🔊 မေ may
🔊 Június 🔊 ဇွန် june
🔊 Július 🔊 ဇူလိုင် ju liaN
🔊 Augusztus 🔊 ဩဂုတ် ah to ba
🔊 Szeptember 🔊 စက်တင်ဘာ sé tem ba
🔊 Október 🔊 အောက်တိုဘာ ah to ba
🔊 Hánykor indulsz? 🔊 ဘယ်နှစ်နာရီပြန်မလဲ Bei ' hnit na yī pyaN me lei
🔊 Reggel 8-kor 🔊 မနက်ရှစ်နာရီ me netʔ shitʔ na yī̠
🔊 Reggel negyed 9-kor 🔊 မနက်ရှစ်နာရီ ဆယ့်ငါး me netʔ shitʔ na yī̠ setʔ ŋa
🔊 Reggel fél 9-kor 🔊 မနက်ရှစ်နာရီ ခွဲ Me netʔshitʔ na yī̠ kawei
🔊 Reggel háromnegyed 9-kor 🔊 မနက်ကိုးနာရီထိုးဘို့ဆယ့်ငါးမိနစ် me netʔ ko na yi to pau' setʔ ŋa mi niʔ
🔊 Este 6-kor 🔊 ညနေခြောက်နာရီ ŋya nei chaukʔ na yī
🔊 Késésben vagyok 🔊 ကျနော် နောက်ကျနေပြီ kya nau naukʔ kya nei pi
🔊 Hová lesz? 🔊 ဘယ်ကိုသွားချင်လဲ bai ko thou chin lé
🔊 A pályaudvarra, legyen szíves 🔊 ဘူတာရုံ ကိုသွားမယ် bū ta youN ko thou mei
🔊 A Nappal és Éjjel hotelbe, legyen szíves 🔊 ဟိုတယ် မှာနေ့ရောညပါ နေမယ် ho tei mha nei yau ̄ŋya pa nei mei
🔊 Kivinneareptérre? 🔊 လေဆိပ်ကိုပို့ပေးနိုင်မလား lai saitʔ ko pot pai ŋaiN me lɑ̄
🔊 Hoznáacsomagjaimat? 🔊 အထုပ်တွေယူပေးနိုင်မလား di tautʔ tewai yū pai naing me lā
🔊 Messze van? 🔊 ဒီကနေတော်တော်ဝေးသလား di ka nei tau tau wai the lɑ̄
🔊 Nem, itt van közel 🔊 နီးနီးလေးပါ nī nī lai pa
🔊 Igen, egy kicsit messzebb van 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ နဲနဲဝေးတယ် hoʔ kei, nei nei wai tai
🔊 Mennyibe fog kerülni? 🔊 ဘယ်လောက်ကျ မလဲ bai laukʔ kya me lé
🔊 Vigyen ide, legyen szíves 🔊 ဒီကိုပို့ပေးပါ di ko pot pé pa
🔊 Jobbra 🔊 ညာဘက် nya betʔ
🔊 Balra 🔊 ဘယ်ဘက် bai betʔ
🔊 Egyenesen 🔊 တည့်တည့် téi téi
🔊 Itt van 🔊 ဒီမှာ di mha
🔊 Erre van 🔊 ဟိုမှာ ho mha
🔊 Állj! 🔊 ရပ် ! yatʔ
🔊 Csak nyugodtan 🔊 ဖြေးဖြေးလုပ်ပါ pyé pyé lautʔ pa
🔊 Tudna számlát adni? 🔊 ကားခဖြတ်ပိုင်းလေးရေးပေးပါ kɑ̄ kha pyatʔ paiN lei yei pei pa
🔊 Vannak itt rokonaid? 🔊 ဒီမှာမိသားစုရှိသလား di mha mi tha 'su shitʔ tha la
🔊 Édesapám 🔊 အဖေ ah pei
🔊 Édesanyám 🔊 အမေ ah mei
🔊 A fiam 🔊 သား thɑ̄
🔊 A lányom 🔊 သမီး thɑ̄ mi
🔊 Fiútestvér 🔊 အစ်ကို ah ko
🔊 Lánytestvér 🔊 အစ်မ ah ma
🔊 Barát 🔊 သူငယ်ချင်း thu ŋei chiN
🔊 Barátnő 🔊 သူငယ်ချင်း thu ŋei chiN
🔊 A barátom 🔊 ကျမသူငယ်ချင်း kya ma thu ŋei chiN
🔊 A barátom 🔊 ကျနော့်သူငယ်ချင်း kya nau thu ŋei chiN
🔊 A barátnőm 🔊 ကျနော့်သူငယ်ချင်း kya nau thu ŋei chiN
🔊 A férjem 🔊 ကျမခင်ပွန်း kya ma kiN puN
🔊 A férjem 🔊 ကျမယောက်ျား kya ma yaukʔ kya
🔊 A feleségem 🔊 ကျနော့် မိန်းမ kya nau maiN ma
🔊 A feleségem 🔊 ကျနော့် ဇနီး kya nau za nī
🔊 Nagyon szeretem az országodat 🔊 ကျနော် ခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုတော်တော်ကြိုက်ပါတယ် kya nau kiN byā do taiN pyi tau tau kyaik tai
🔊 Szeretlek 🔊 ချစ်တယ် chitɁ tai
🔊 Boldog vagyok 🔊 ပျော်တယ် pyau tai
🔊 Szomorú vagyok 🔊 စိတ်ညစ်တယ်/ဝမ်းနည်းတယ် saitɁ nyitɁ tai / wouN né tai
🔊 Jól érzem magam itt 🔊 ဒီမှာပျော်တယ် di mha pyau tai
🔊 Fázom 🔊 ချမ်းတယ် chaN tai
🔊 Melegem van 🔊 အိုက်တယ် aitɁ tai
🔊 Túl nagy 🔊 ကြီးတယ် kyī tai
🔊 Túl kicsi 🔊 သေးတယ် thé tai
🔊 Tökéletes 🔊 အတော်ပဲ ah tau pai
🔊 Szeretnél elmenni valahová ma este? 🔊 ဒီညနေအပြင်ထွက်ချင်လား di nya nai ah pyiN twetɁ chiN lā
🔊 Szeretnék elmenni valahová ma este 🔊 ဒီညနေအပြင်ထွက်ချင်ပါတယ် di nya nai ah pyiN twetɁ chiN pa tai
🔊 Jó ötlet! 🔊 ဒီအစီအစဉ်ကောင်းတယ် di ah si ah sin kaung tai
🔊 Szeretnék szórakozni 🔊 ပျော် ချင် လို့ ပါ pyau chiN loɁ pa
🔊 Nem jó ötlet 🔊 ဒီအကြံမကောင်းဘူး di ah kyaN me kaung bū
🔊 Nem akarok elmenni ma este 🔊 ဒီညနေအပြင်မထွက်ချင်ဘူး di nya nai ah pyiN ma twetɁ chiN bū
🔊 Szeretnék pihenni 🔊 ကျနော် အနားယူချင်တယ် kya nau ah nā yu chiN the lā
🔊 Szeretnél sportolni? 🔊 အားကစား သွားလုပ်ချင်သလား ah ka sā thou lautɁ chiN the lā
🔊 Igen, ki kell eresztenemafeszültséget 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ လှုပ်လှုပ်ရှားရှား လုပ်မှဖြစ်မယ် hokʔ ké' , hlauɁ hlauɁ shā shā lautɁ mha pyit mai
🔊 Teniszezek 🔊 ကျနော် တင်းနစ်(စ)ကစားတယ် kya nau tin nitɁ ka sā tai
🔊 Nem, köszönöm, elég fáradt vagyok 🔊 မကစားချင်ပါဘူး မောနေလို့ me ka sā chiN pa bū mau nén lauɁ
🔊 A bár 🔊 ဘား/အရကျဆိုငျ/ဘီယာဆိုငျ ba/ ah yet ? SaiN
🔊 Iszol valamit? 🔊 ဘာသောက်ချင်သလဲ ba thauʔ chiN the lei
🔊 Inni 🔊 သောက် thauʔ
🔊 Pohár 🔊 ဖန်ခွက် paN kwétʔ
🔊 Szívesen 🔊 ကောင်းပါတယ် kaung pba tei
🔊 Mit kérsz? 🔊 ဘာသောက်ချင်သလဲ ba thauʔ chiN te lei
🔊 Mit lehet inni? 🔊 ဘာသောက်စရာရှိသလဲ ba thauʔ sa ya chi' te leai
🔊 Van víz, vagy gyümölcslevek 🔊 ရေနဲ့အသီးဖျော်ရည် yei nei ah thi pyau yei
🔊 Víz 🔊 ရေ/သောက်ရေသန့် yei/ thaukʔ yei than'
🔊 Kérhetek bele jégkockát? 🔊 ရေခဲထည့်ပေးပါ yei khé téi pé ba
🔊 Jégkocka 🔊 ရေခဲ yei khé
🔊 Csoki 🔊 ချောကလက်ဖျော်ရည် shau ka letʔ pyau yei
🔊 Tej 🔊 နွားနို့ nwoa noʔ
🔊 Kávé 🔊 ကော်ဖီ kau pi
🔊 Cukorral 🔊 သကြားနဲ့ the kyɑ̄ nei'
🔊 Tejszínnel 🔊 နို့နဲ့ no' nei'
🔊 Bor 🔊 ဝိုင် waiN
🔊 Sör 🔊 ဘီယာ bi ya
🔊 Egy teát kérek 🔊 လဘက်ရည်တစ်ခွက်ပေးပါ la péʔ yei thit kaweiʔ 'pé pa
🔊 Egy sört kérek 🔊 ဘီယာတစ်ခွက်ပေးပါ bi ya te kwoéʔ pé pa/ba
🔊 Mit adhatok? 🔊 ဘာသောက်ချင်ပါသလဲ ba thauʔ shiN pa the lei
🔊 Két teát kérünk szépen 🔊 လဘက်ရည်နှစ်ခွက်ပေးပါ။ la péʔ yei nhitʔ kwoéʔ ' pé pa
🔊 Két sört kérünk szépen 🔊 ဘီယာနှစ်လုံးပေးပါ။ bi ya nhitʔ 'loN pé pa
🔊 Semmit, köszönöm 🔊 ရပါတယ်၊ ya pa tai
🔊 Semmit, köszönöm 🔊 ကိစ္စမရှိပါဘူး။ kéʔ sa ma shi' pa/ba bū
🔊 Egészségedre! 🔊 သင့်အတွက် thin ah toué
🔊 Egészségünkre! 🔊 ချီယားစ် cheers
🔊 A számlát, legyen szíves 🔊 ဘီ(လ) ရှင်းမယ် bill shiN mei
🔊 A számlát, legyen szíves 🔊 ဘယ်လောက်ကျသလဲ bei laukʔ kya the lei
🔊 Mennyivel tartozom? 🔊 ဘယ်လောက်ပေးရမလဲ bei laukʔ pei ya me lei
🔊 Húsz euróval 🔊 ယူရို နှစ်ဆယ် euro hnit sai
🔊 Meghívlak 🔊 ကျမပေးပါရစေ kya ma pei pa ya sai
🔊 Az étterem 🔊 စားသောက်ဆိုင် sɑ̄ thauʔ saiN
🔊 Akarsz enni? 🔊 စားချင်ပြီလား။ sɑ̄ shiN pyi lɑ̄
🔊 Igen, szeretnék 🔊 ဟုတ်ကဲ့ စားချင်ပါတယ်။ hokʔ ké' sɑ̄ chiN pa tai
🔊 Enni 🔊 စားမယ်။ sɑ̄ mei
🔊 Hol tudunk enni? 🔊 ဘယ်ဆိုင်မှာစားလို့ရမလဲ။ bei saiN mha sɑ̄ lo' ya me lei
🔊 Hol tudunk ebédelni? 🔊 နေ့လည်စာ ဘယ်မှာစားလို့ရမလဲ။ nei' lé sa bei lha sɑ̄ lo' ya me lei
🔊 Vacsora 🔊 ညစာ nya sa
🔊 Reggeli 🔊 နံနက်စာ naN neiʔ sa
🔊 Elnézést 🔊 ခွင့်ပြုပါရှင် kwoiN pyu pa shiN
🔊 Kérhetek egy étlapot? 🔊 မီနျူးလေးရနိုင်မလား။ menu 'lei ya naiN me lɑ̄
🔊 Az étlap 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာပါ။ hokʔ ké' di mha pa
🔊 Mit szeretnél inkább, húst, vagy halat? 🔊 ဘာစားချင်လဲ၊ ငါးဟင်းလား၊ အသားဟင်းလား။ ba sɑ̄ chiN lei / nha hiN lɑ̄ / ah tɑ̄ hiN lɑ̄
🔊 Rizzsel 🔊 ထမင်းလည်းစားမယ်။ tha miN 'lei sɑ̄ mei
🔊 Tésztával 🔊 ခေါက်ဆွဲ လည်းစားမယ်။ kaukʔ swei 'lei sɑ̄ mei
🔊 Krumpli 🔊 အာလူး။ ah ū
🔊 Zöldség 🔊 ဟင်းသီး ဟင်းရွက်။ 'hiN thī 'hiN yoweʔ
🔊 Rántotta - tükörtojás - lágytojás 🔊 ကြက်ဥမွှေကြော်၊ ကြက်ဥအလုံးကြော်၊ ကြက်ဥ မကျက်တကျက်ပြုတ်။ kyeʔ 'u mwoei kyau / kyeʔ 'u ah loN kyau / kye ? 'u ma kyéʔ te kyeʔ pyauʔ
🔊 Kenyér 🔊 ပေါင်မုန့် paung moN'
🔊 Vaj 🔊 ထောပတ် tau baʔ
🔊 Saláta 🔊 ဆလပ်ရွက် sa laʔ yoweʔ
🔊 Desszert 🔊 အချိုပွဲ ah cho pywei
🔊 Gyümölcs 🔊 အသီးအနှံ ah thī ah nhaN
🔊 Kérhetek egy kést? 🔊 ဓားရှိသလား။ dā shi' the lā
🔊 Igen, azonnal hozom 🔊 အခုယူလာပေးပါမယ်။ ah ku yu la ' pei pa mei
🔊 Kés 🔊 ဓား dā
🔊 Villa 🔊 ခက်ရင်း keiʔ yiN
🔊 Kanál 🔊 ဇွန်းတစ်ချောင်း 'zouN thit chaung
🔊 Ez egy melegétel? 🔊 ဒီဟင်းကပူပူနွေးနွေးလား။ di 'hiN ka pu pu nwei nwei lɑ̄
🔊 Igen, és elég fűszeres is 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ စပ်လည်းစပ်တယ်။ hokʔ ké' / satʔ lei satʔ tei
🔊 Meleg 🔊 ပူတယ်။ pu tei
🔊 Hideg 🔊 အေးတယ်။ 'ai tei
🔊 Fűszeres 🔊 စပ်တယ်။ satʔ tei
🔊 Halat kérek 🔊 ငါးမှာမယ်။ 'ŋa mha mei
🔊 Én is 🔊 ကျမလည်းအတူတူဘဲ။ kya ma 'lei ah tu tu bei
🔊 Én is 🔊 ကျနော်လည်းအတူတူဘဲ။ Kya nau 'lei ah tu tu bei
🔊 Késő van, mennem kell 🔊 နောက်ကျနေပြီ၊ naukʔ kya nay pi
🔊 Késő van, mennem kell 🔊 သွားတော့မယ် 'thou dau' mei
🔊 Találkozunk megint? 🔊 နောက်ပြန်တွေ့လို့ရဦးမလား pyaN twei' loʔ ya ohN me lā
🔊 Igen, szívesen 🔊 တွေ့ကြတာပေါ့ twei' kya ta pauʔ
🔊 Ezacímem 🔊 ဒါ ကျမလိပ်စာပါ da kya me laiʔ sa ba
🔊 Van telefonszámod? 🔊 ဖုန်းနံပါတ် ပေးပါလား phone number pei pa lā
🔊 Igen, tessék 🔊 ရော့၊ ဒီမှာ yaūʔdmha
🔊 Jól éreztem magam veled 🔊 အခုလိုတွေ့ရတာ ပျော်ပါတယ် ah kuʔ lo thweiʔ ya ta pyau pa tei
🔊 Én is örülök, hogy találkoztunk 🔊 ကျမလည်း ရှင်နဲ့ တွေ့ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာပါတယ် kya ma lei shiN nei' thwai' ya ta wiN tha pa tei
🔊 Hamarosan újra találkozunk 🔊 ပြန်ဆုံကြရအောင်နော် pyaN souN ya aung nau
🔊 Én is remélem 🔊 ပြန်ဆုံမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် pyan souN mei lo myau liN' pa tei
🔊 Viszlát! 🔊 သွားတော့မယ် thwa mei
🔊 Holnap találkozunk 🔊 မနက်ဖြန် တွေ့မယ် me nei pyaN twei' mei
🔊 Szia! 🔊 တာ့တာ ta ta
🔊 Elnézést, merre vanabuszmegálló? 🔊 ဘတ်(စ)ကား မှတ်တိုင် လေးတစ်ဆိတ်လောက် Bus car matʔ taiN lei titʔ saiʔ laukʔ
🔊 Mennyibe kerülajegy «Napvárosba»? 🔊 ရနျကုနျအတှကျလတျမှတျဘိုးဘယျလောကျကလြဲ yan gon ah téwaiʔ letʔ mhatʔ bei laukʔ kya the lé
🔊 Elnézést, hová megy ezavonat? 🔊 ဒီရထားကဘယ်ကိုသွားတာလဲ di yet tɑ̄ ka bei ko thou ta lé
🔊 Ezavonat megáll «Napvárosban»? 🔊 ဒီရထားက ရန်ကုန် မှာရပ်လား di yet tɑ̄ ka yan gon mha yatʔ lɑ̄
🔊 Mikor indulavonat «Napvárosba»? 🔊 ရန်ကုန် ကိုသွားတဲ့ရထား ဘယ်အချိန်ထွက်မှာလဲ yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
🔊 Mikor jöna«Napvárosba» menő vonat? 🔊 ရန်ကုန် ကိုသွားတဲ့ရထား ဘယ်အချိန်ဆိုက်မှာလဲ yan gon ko thou téi yet tɑ̄ bei ah chaiN tawetʔ mha lé
🔊 Egy jegyet szeretnék «Napvárosba» 🔊 ရန်ကုန် မြို့ အတွက် လက်မှတ် တစ်စောင်ပေးပါ yan gon myo ah tawetʔ letʔ mhaʔ thitʔ saung pei pa
🔊 Meg tudná adniavonatok menetrendjét? 🔊 ရထား အချိန်ဇယားရှိလား yet tɑ̄ ah chaiN za yɑ̄ shiʔ lɑ̄
🔊 Buszmenetrend 🔊 ဘတ်(စ) ကား အချိန်ဇယား bus car ah chaiN za yɑ̄
🔊 Elnézést, melyik vonat megy «Napvárosba»? 🔊 ရန်ကုန် မြို့သွားတဲ့ရထားက ဘယ်မှာလဲ yan gon myo thou téi yet tɑ̄ ka bei mha lé
🔊 Ez 🔊 ဒီရထား di yet tɑ̄
🔊 Nincs mit, jó utat! 🔊 ကိစ္စမရှိပါဘူး၊ ခရီးချောမွေ့ပါစေ kaiʔ sa ma shi pa bū / ka yi tchau moué pa zei
🔊 Autószervíz 🔊 ကားဝပ်ရှော့ kā woʔ yau
🔊 Benzinkút 🔊 ဓါတ်ဆီဆိုင် datʔ si saiN
🔊 Tele kérem 🔊 ဓါတ်ဆီ အပြည့် ဖြည့်ပေးပါ datʔ si ah pyé pyé phyé pé pa
🔊 Bicikli 🔊 စက်ဘိန်း (ဘီး) setʔ baiN / bī
🔊 Belváros 🔊 မြို့လယ်ခေါင်/ မြို့ထဲ myo lai kyaung / myo tei
🔊 Külváros 🔊 ဆင်ခြေဖုံး/မြို့ပြင် shin ché phoN / myo pyiN
🔊 Ez egy nagyváros 🔊 မြို့ကြီး myo kyī
🔊 Ez egy nagyváros 🔊 ရွာ ywoa
🔊 Hegy 🔊 တောင် taung
🔊 Tó 🔊 ရေကန် ye kaN
🔊 Vidék 🔊 မြို့ပြင် myo pyiN
🔊 Lakás 🔊 တိုက်ခန်း taikʔ kaN
🔊 Üdvözlöm! 🔊 ကြိုဆိုပါတယ် kyo sho pa tai
🔊 Van szabad szobájuk? 🔊 အခန်းလွတ်ရှိပါသလား ခင်ဗျာ / ရှင် ah kaN luʔ shi thé lā kin bya/ shiN
🔊 Van fürdőszobaaszobához? 🔊 ရေချိုးခန်းပါလား yé chō kaN pa lā
🔊 Két egyszemélyes ágyat szeretne? 🔊 တစ်ယောက်အိပ်ကုတင် နှစ်လုံး လိုချင်ပါသလား thit yaukʔ ait ku tin hnit loN lo chin the lā
🔊 Duplaágyas szobát szeretne? 🔊 နှစ်ယောက်အိပ် အခန်းယူချင်ပါသလား hnit yaukʔ ait ah kaN yu chiN pa the lā
🔊 Szoba fürdőkáddal - erkéllyel - zuhanyzóval 🔊 ရေချိုးကန်ပါတဲ့အခန်း/ ဝရံတာ ပါတဲ့အခန်း/ ရေချိုးခန်းပါတဲ့အခန်း yé chō kaN pa téi ah kaN/ wo yaN da pa téi ah kaN / yé chō kaN pa téi ah kaN
🔊 Szoba reggelivel 🔊 မနက်စာပါတဲ့အခန်း ma netɁ sa pa téi ah kaN
🔊 Mennyibe kerül egy éjszaka? 🔊 တစ်ညဘယ်လောက်ကျလဲ titʔ nya bet laukɁ kya lé
🔊 Először szeretném megnézniaszobát 🔊 အခန်းကိုအရင်ကြည့်ချင်ပါတယ်။ ah kaN ko ah yin kyi chin pa tai
🔊 Persze! 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ ရပါတယ် hokʔ ké' , ya pa tai
🔊 Köszönöm,aszoba nagyon jó 🔊 အခန်းကတော်တော်ကောင်းပါတယ်၊ ကျေးဇူးပါဘဲ ah kaN ka tau tau kaung pa tai , kyé zū pa bé
🔊 Jó, foglalhatok ma estére? 🔊 ကောင်းပါပြီ၊ ဒီနေ့ညအတွက် အခန်းယူလို့ရမလား kaung pa pyi. Di nai nya ah thwetɁ ah kaN you loɁ ya me lā
🔊 Ez egy kicsit drága nekem, köszönöm 🔊 နေပါစေတော့၊ ကျနော့် အတွက်တော့ဈေးနည်းနည်းကြီးနေတယ်။ nai pa sé tauʔ, kya nau ah thwét tauʔ zai nei nei kyi nai tai
🔊 Tudnák hozniacsomagjaimat? 🔊 ကျနော့် ပစ္စည်းတွေသယ်လာပေးနိုင်မလား kya nau pyit sī tway thé la pé naiN me lā
🔊 Elnézést, hol vanaszobám? 🔊 ကျနော့် အခန်းဘယ်မှာ ပါလဲ kya nau ah kaN bai mha pa lé
🔊 Az első emeleten 🔊 နှစ်လွှာမှာပါ hnit lewo mha pa
🔊 Van lift? 🔊 ဓါတ်လှေခါး ရှိလား datʔ lhé khā shiɁ lā
🔊 Balra vanalift 🔊 ဓါတ်လှေခါး ဘယ်ဖက်မှာရှိပါတယ် datʔ lhé khā bai phét mha shiɁ pa tai
🔊 Jobbra vanalift 🔊 ဓါတ်လှေခါး ညာဖက်မှာရှိပါတယ် datʔ lhé khā nya phét mha shiɁ pa tai
🔊 Merre vanamosoda? 🔊 ပင်းမင်းခန်းဘယ်မှာရှိပါသလဲ hiN miN khaN bai mha shiɁ pa the lé
🔊 A földszinten 🔊 မြေညီထပ် မှာပါ။ myé nyi tatɁ mha pa
🔊 Földszint 🔊 မြေညီထပ် myé nyi tatɁ
🔊 Szoba 🔊 အခန်း ah kaN
🔊 Tisztító 🔊 ပင်းမင်းဆိုင် piN miN saiN
🔊 Fodrászat 🔊 ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်။ saN piN nyut saiN
🔊 Parkoló 🔊 ကားပါကင်။ kā pa kiN
🔊 Találkozunkatárgyalóban? 🔊 အစည်းအဝေးခန်းဘယ်မှာလဲ။ ah sī ah wai kaN bai mha lé
🔊 Tárgyaló 🔊 အစည်းအဝေးခန်း ah sī ah wai kaN
🔊 A medence fűtött 🔊 ရေနွေးတဲ့ ရေကူးကန် yé nawai téi yé kū kaN
🔊 Medence 🔊 ရေကူးကန် yé kū kaN
🔊 Kérem, ébresszenek fel 7-kor 🔊 မနက် ခုနှစ်နာရီမှာ နှိုးပေးပါ ma netɁ ku hnit na yi mha nho pé pa
🔊 A kulcsot, legyen szíves 🔊 ကျေးဇူးပြုပီး သော့ပေးပါ။ ké zū pyu pi thauʔ pé pa
🔊 A belépőkártyát, legyen szíves 🔊 ကျေးဇူးပြုပီး ဝင်ခွင့်လက်မှတ်ပေးပါ။ ké zū pyu pi wiN kwint let mhatʔ pé pa
🔊 Hagytak nekem üzenetet? 🔊 ကျနော့် အတွက် ဘာသတင်းပေးထားတာရှိပါလဲ kya nau ah twet ba tha tin pei tā ta shit pa la
🔊 Igen, itt vannak 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာပါ hokʔ ké' , di mha pa
🔊 Nem, nem kapott semmit 🔊 ရှင့်အတွက် ဘာမှမရှိပါဘူး shin ah twet ba mha ma shiɁ bū
🔊 Hol tudok pénzt felváltani? 🔊 အကြွေဘယ်မှာလဲလို့ရမလဲ ah kywai bai mha lé loʔ ya me lé
🔊 Tudna nekem pénzt felváltani? 🔊 ပိုက်ဆံ အကြွေလဲပေးပါ ခင်ဗျာ paikʔ saN ah kywai lé pei pa kin bya
🔊 Igen, mennyit szeretne felváltani? 🔊 ရပါတယ်၊ ဘယ်လောက်လဲချင်ပါသလဲ ya pa tai. Bé lautʔ lé chiN pa the lé
🔊 Beszélhetnék Sarah-val? 🔊 ဆာရာ (Sarah) ရှိပါသလား Sarah chiɁ pa the lā
🔊 Igen itt van 🔊 ရှိပါတယ် chitɁ tai
🔊 Sarah elment 🔊 အပြင်သွားပါတယ် ah pyiN thou pa tai
🔊 Fel tudná hívniamobilján? 🔊 သူ့ဖုန်းကိုဆက်ကြည့်ပါ thu phone ko setɁ kyi pa
🔊 Meg tudná mondani, hol találom? 🔊 သူ့ကို ဘယ်မှာသွားရှာရမလဲ thu ko bai mha thuwa sha ya me lé
🔊 Dolgozik 🔊 သူအလုပ်သွားတယ် thu ah lautɁ thuwa tai
🔊 Otthon van 🔊 သူအိမ်မှာရှိတယ် thu aiN mha chiɁ tai
🔊 Beszélhetnék Julien-nel? 🔊 ဂျူလီယံ (Julien) ရှိပါသလား Julien chiɁ pa the lā
🔊 Igen itt van 🔊 ရှိပါတယ် chitɁ pa tai
🔊 Julien elment 🔊 အပြင်သွားပါတယ် ah pyiN thou pa tai
🔊 Strand 🔊 ပင်လယ်ကမ်းခြေ / ဘိ (ချ) piN lai kaN kyé / bi (che)
🔊 Meg tudja mondani, hol tudok labdát venni? 🔊 ဘောလုံးဘယ်မှာဝယ်လို့ရမလဲ bau loN bei mha wai loʔ ya me lé
🔊 Erre van egy bolt 🔊 ဒီတည့်တည့်သွားရင် ဆိုင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် di té té twā yin sain twaiʔ pa laint mé
🔊 Labda 🔊 ဘောလုံး bau loN
🔊 Távcső 🔊 မှန်ပြောင်း mhaN pyaung
🔊 Baseball-sapka 🔊 ကက်ဦးထုပ် တစ်လုံး ket au thaukʔ tit loN
🔊 Törölköző 🔊 မျက်နှာသုတ်ပုဝါ myét nha thauk pu wa
🔊 Szandál 🔊 ညှပ်ဖိနပ် nyatʔ phi nat
🔊 Vödör 🔊 ရေပုံး yé poN
🔊 Napkrém 🔊 နေရောင်ကာ ခရင်(မ) nai yaung ka kha riN (me)
🔊 Fürdőnadrág 🔊 ရေကူးဘောင်းဘီ yé kū baung bi
🔊 Napszemüveg 🔊 နေကာမျက်မှန် nai ka myet myamaN
🔊 Rákféle 🔊 ပင်လယ်စာ piN lai sa
🔊 Napfürdőt venni 🔊 နေစာလှုံ nai sa loN
🔊 Napos 🔊 နေသာတယ် nai tha tai
🔊 Napnyugta 🔊 နေဝင်ချိန် nai wiN chain
🔊 Napernyő 🔊 နေကာထီး nai ka tī
🔊 Nap 🔊 နေ nai
🔊 Napszúrás 🔊 နေသာချိန် nai tha chain
🔊 Veszélyes itt úszni? 🔊 ဒီမှာရေကူးရင် အန္တရယ် ရှိလား di mha yé kū yin ane de yai shiʔ lā
🔊 Nem, nem veszélyes 🔊 အန္တရယ်မရှိပါဘူး ane de yai me shiʔ pa bū
🔊 Igen, tilos itt fürdeni 🔊 ဟုတ်ကဲ့၊ ဒီမှာရေကူးလို့မရပါဘူး hokʔ ké' , di mha yé kū lo me ya pa bū
🔊 Úszni 🔊 ရေကူးတယ် yé kū tai
🔊 Úszás 🔊 ရေကူး yé kū
🔊 Hullám 🔊 လှိုင်း hlaing
🔊 Tenger 🔊 ပင်လယ် piN lai
🔊 Dűne 🔊 သဲသာင်ကုန်း thé thaung kouN
🔊 Homok 🔊 သဲ thé
🔊 Milyen időt mondanak holnapra? 🔊 မနက်ဖြန်အတွက်ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက် ဘယ်လိုလဲ me nei pyaN twei' ya thi ū tu kaNt mhaN chetɁ bai lo lé
🔊 Változni fog az időjárás 🔊 ရာသီဥတု အပြောင်းအလဲရှိတယ် ya thi ū tu ah pyaung lé shiɁ tai
🔊 Esni fog 🔊 မိုးရွာလိမ့်မယ် mō yawa laint mai
🔊 Sütni foganap 🔊 နေသာလိမ့်မယ် nai tha laint mai
🔊 Sokat fog fújniaszél 🔊 လေတိုက်လိမ့်မယ် lai taikɁ laint mai
🔊 Fürdőruha 🔊 ရေကူးဝတ်စုံ yé kū wut sauN
🔊 Árnyék 🔊 အရိပ် ah yaitɁ
🔊 Elnézést, tudna segíteni? 🔊 ကျနော့် ကိုကူညီပါ kya nau ko ku nyi pa
🔊 Elnézést, tudna segíteni? 🔊 ကျမကိုကူညီပါ kya ma ko ku nyi pa
🔊 Eltévedtem 🔊 ကျမမျက်စေ့လည်နေပြီ kya ma myetʔ si lei nei pyi
🔊 Eltévedtem 🔊 ကျမလမ်းပျောက်နေပြီ။ kya ma laN pyauʔ nei pyi
🔊 Mit szeretne? 🔊 ဘာအကူအညီပေးရမလဲ ba ah ku nyi pei ya me lei
🔊 Mi történt? 🔊 ဘာဖြစ်လဲ ba pyitʔ lei
🔊 Hol találok tolmácsot? 🔊 စကားပြန် ဘယ်မှာရနိုင်မလဲ sa kɑ̄ pyaN bei mha ya naiN me lei
🔊 Holalegközelebbi gyógyszertár? 🔊 ဆေးဆိုင် အနီးဆုံးဘယ်မှာလဲ sei saiN ah nī souN bei mha lei
🔊 Kérem, hívjon orvost! 🔊 ဆရာဝန်ခေါ်ပေးပါ sa ya ouN ko kau pei ba
🔊 Milyen kezelést kap jelenleg? 🔊 ဘာဆေးသောက်နေလဲ ba sei thaukʔ nei the lei
🔊 Kórház 🔊 ဆေးရုံ sei youN
🔊 Gyógyszertár 🔊 ဆေးဆိုင် sei saiN
🔊 Orvos 🔊 ဆရာဝန် sa ya ouN
🔊 Orvos 🔊 ဆေးခန်း sai kaN
🔊 Elvesztettem az irataimat 🔊 ကျ နော့်စာရွက်စာတန်း တွေပျောက်သွားလို့ kya nauʔ sa yawetʔ pyaukʔ thwau loʔ
🔊 Ellopták az irataimat 🔊 ကျ နော့်စာရွက်စာတန်း တွေအခိုးခံရလို့ kya nauʔ sa yawetʔ thwai ah kho kaN ya loʔ
🔊 Talált tárgyak osztálya 🔊 ပျောက်ဆုံးပစ္စည်း များရှာဖွေရန်နေရာ pyaukʔ saN pyitʔ sī mya sha pwai yaN nei ya
🔊 Elsősegély-állomás 🔊 အရေးပေါ်ဌာန ah yei pau tha na
🔊 Vészkijárat 🔊 အရေးပေါ်ထွက်ပေါက် ah yei pau thwetʔ pauʔ
🔊 Rendőrség 🔊 ရဲ yé
🔊 Iratok 🔊 စာရွက်စာတန်း sa yawetʔ
🔊 Pénz 🔊 ပိုက်ဆံ péʔ saN
🔊 Útlevél 🔊 နိုင်ငံကူးလက်မှတ် naiN 'ŋaiN kū letʔ mhatʔ
🔊 Útlevél 🔊 ပတ်(စ)ပို့ Passport
🔊 Csomagok 🔊 သေတ္တာ thitʔ ta
🔊 Csomagok 🔊 ခရီးဆောင်အိတ် kha yī saung aitʔ
🔊 Köszönöm, nem 🔊 ရပါတယ်၊ မလိုပါဘူး ya ba tei / ma lo pa bū
🔊 Hagyjon békén! 🔊 မနှောက်ယှက်ပါနဲ့ ma nhautʔ shetʔ pa nei'
🔊 Menjen innen! 🔊 သွား thwaū
Mp3 és pdf letöltése > Burmai